Apple waxay horey u iibisay Kiiboodhka Magic -ka oo leh Aqoonsi Taabasho si gooni ah | Waxaan ka imid mac
Apple waxay mar horeba si gooni ah u iibinaysaa Keyboard -ka Magic -ka leh ID -ga taabashada
El 20-dii Abriil ee la soo dhaafayMarkii la bilaabay iMac -ga cusub, Keyboard -ka cusub ee Magic -ka oo leh ID -ga taabashada ayaa si wada jir ah loo bilaabay, waana markii aan la yaabnay goorta aan u iibsan karno keyboard -ka sidii qalab gooni ah. Waxaa la gaaray waqtigii si gaar ah loo iibsan lahaa qalabkaas. Apple ayaa horey u iibisay qiimo dhan 159-185 euros. Ku dhawaad ​​waxba.
Markii la bilaabay iMac, Keyboard -ka cusub ee Magic -ka oo leh ID -ga taabashada ayaa loo bilaabay sidii qalab ahaan. Laakiin wakhtigaas waxaad heli kartaa kaliya kiiboodhkaas haddii aad iibsatay kombiyuutarka. Kuwo badan ayaa jeclaan lahaa inay iibsadaan alaab -qeybiye oo daqiiqad qeexan ayaa u timid. Dulqaadku wuxuu leeyahay lacagtiisa. Waxaan hore u haysannay qiimo 159 euro ama 185 waxay ku xiran tahay haddii aad iibsato malaha teebtii tirada o isaga.
Qodob muhiim ah oo maskaxda lagu hayo ayaa ah in Apple ay leedahay Keyboard -ka Magic -ka leh ID -ga taabashada Waxay la jaan qaadi kartaa oo keliya Mac -yada leh Apple Silicon waxayna wadaan macOS 11.4 ama wixii ka dambeeya. Iyada oo leh ID Touch oo lagu dhisay keyboard -ka, MacBook Air, MacBook Pro, iyo Mac mini oo leh isticmaaleyaasha M1 ayaa hadda si ku habboon u isticmaali kara Aqoonsiga Taabashada oo leh keyboard ka baxsan.
Mana kuu keeno war wanaagsan xagga midabka. Haddii aad sugaysay inaad ku iibsato Kiiboodhka Magoc cagaar, casaan ama mid kasta oo la heli karo oo u dhigma iMac -ga cusub, waa inaad iska illowdaa. Hadda haddii aad u iibsato kiiboodhka sidii siyaad gooni ah, waxaad ku haysan doontaa lacag uun. Midab ma laha. Way fiicnaan lahayd haddii lagu soo saaro midabbo kala duwan gaar ahaan qiimaha ay la yimaadaan. Laakiin waa Apple, oo awood u leh kan ugu fiican uguna xun, ugu yaraan marka la eego waxyaabaha la yaabka leh ee ay na siiso.
Ma aqaan haddii aan ku dhiirrado, laakiin Ma iibsan lahayd?. Waayo ?.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay mar horeba si gooni ah u iibinaysaa Keyboard -ka Magic -ka leh ID -ga taabashada
Gurman wuxuu hubiyaa in AirPods 3 cusub la soo bandhigi doono iPhone 13
Mac Pro wuxuu hadda aqbalaa kaararka garaafyada AMD RDNA2 ee cusub